ထွက်မြောက်ရာ 26 (Myanmar/Burmese: Judson (1835)); Coronis (Buss translation) # 37České uživatelské rozhraní
Myanmar/Burmese: Judson (1835)ထွက်မြောက်ရာ
1 တနည်းကား၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်ဖြင့် ပြီးသော ခေရုဗိမ်ခေရုဗိမ်အရုပ်နှင့် ချယ်လှယ်သော၊ ပိတ်ချောပိတ်ချောကုလားကာကုလားကာဆယ်ထည်ဖြင့် တဲတော်ကို လုပ်ရမည်။
2 ကုလားကာကုလားကာသည် အလျားနှစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်ရှစ်ရှစ်တောင်၊ အနံလေးလေးတောင်ရှိ၍၊ ကုလားကာကုလားကာချင်း အလျားအနံ တူရမည်။
3 ကုလားကာကုလားကာငါးငါးထည်စီ တစပ်တည်းချုပ်ရမည်။
4 ကုလားကာကုလားကာတထည်ပြင်ဘက်ဘက်မှာ၊ ကုလားကာကုလားကာနားချင်းဆက်မှီရာ၌ ကွင်းများကို ပြာသောအထည်နှင့် လုပ်ရမည်။ အခြားသော ကုလားကာကုလားကာ ပြင်ဘက်ဘက်မှာ၊ ကုလားကာကုလားကာနားချင်း ဆက်မှီရာ၌လည်း ထိုအတူလုပ်ရမည်။
5 ကုလားကာကုလားကာတထည်၌ ကွင်းငါးဆယ်ငါးဆယ်ကို၎င်း၊ အခြားသောကုလားကာကုလားကာ အနားဆက်မှီရာ၌ ကွင်းငါးဆယ်ငါးဆယ် ကို၎င်း၊ ကွင်းချင်းဆိုင်မိအောင် လုပ်ရမည်။
6 ရွှေချောင်းငါးဆယ်ငါးဆယ်ကိုလည်း လုပ်၍၊ ထိုရွှေချောင်းဖြင့် ကုလားကာကုလားကာများကို ပူးတွဲသဖြင့်၊ တဲတော် တဆောင်တည်း ဖြစ်ရမည်။
7 တဲတဲတော်ဖုံးအုပ်ဘို့ အခြားသော ကုလားကာကုလားကာဆယ်တထည်ကို ဆိတ်ဆိတ်မွေးနှင့် လုပ်ရမည်။
8 ကုလားကာကုလားကာသည် အလျားအတောင်သုံးဆယ်သုံးဆယ်၊ အနံလေးလေးတောင်ရှိ၍၊ ကုလားကာကုလားကာ ဆယ်တထည်တို့သည် အလျားအနံချင်းတူရမည်။
9 ကုလားကာကုလားကာငါးငါးထည် တစပ်၊ ခြောက်ခြောက်ထည် တစပ်တည်း ချုပ်၍၊ ဆဌမဆဌမကုလားကာကုလားကာကို တဲတဲတော်ဦး၌ ခေါက်ထားရမည်။
10 ကုလားကာကုလားကာများ ဆက်မှီရာ၌၊ ပြင်ဘက်ဘက်ကနေသော ကုလားကာကုလားကာတထည်အနားမှာ၊ ကွင်းငါးဆယ်ငါးဆယ်ကို ၎င်း၊ ဆက်မှီသော အခြားကုလားကာကုလားကာအနားမှာ၊ ကွင်းငါးဆယ်ငါးဆယ်ကို၎င်း လုပ်ရမည်။
11 ကြေးဝါကြေးဝါချောင်း ငါးဆယ်ငါးဆယ်ကိုလည်း လုပ်၍၊ ကွင်းတို့၌ လျှိုပြီးလျှင်၊ အပေါ်တဲတဲတပိုင်းနှင့် တပိုင်း ပူးတွဲသဖြင့်၊ တဲတဲတဆောင်တည်း ဖြစ်ရမည်။
12 ထိုအပေါ်တဲတဲ၌ ပိုသော ကုလားကာကုလားကာ တဝက်တဝက်ကိုကား၊ တဲတဲတော်နောက်ဖေးမှာ တွဲလွဲဆွဲထားရမည်။
13 အပေါ်တဲတဲ၌ပိုသော ကုလားကာကုလားကာ အလျားနှစ်တောင်တွင်၊ တဲတဲတော်ဖုံးအုပ်ဘို့ တဘက်ဘက်တချက် တတောင်စီ တွဲလွဲဆွဲထားရမည်။
14 အပေါ်တဲတဲဖုံးအုပ်ဖုံးအုပ်ဘို့ အနီးဆုံးသောသိုးရေသိုးရေကို၎င်း၊ ထိုသိုးရေသိုးရေအပေါ်၌ တဟာရှသားရေသားရေကို၎င်း လုပ်ရမည်။
15 တဲတော်ကာရန်ထောင်ထားရသော အကာရှပျဉ်ပြားပျဉ်ပြားတို့ကိုလည်း လုပ်ရမည်။
16 ပျဉ်ပြားသည် အလျားဆယ်တောင်၊ အနံတတောင်ထွာ ရှိရမည်။
17 ထိုပျဉ်ပြားပျဉ်ပြားရှိသမျှတို့၌ ခြေထောက်နှစ်နှစ်ခုစီ တတန်းတည်းရှိစေခြင်းငှာ လုပ်ရမည်။
18 တဲတော်တောင်ဘက်တောင်ဘက်၌ ကာရန်ပျဉ်ပြားပျဉ်ပြား နှစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်ကို လုပ်ရမည်။
19 ထိုပျဉ်ပြားပျဉ်ပြားနှစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်တွင်၊ တပြားတပြားအောက်၌ ခြေထောက်နှစ်နှစ်ခုစီစွပ်စရာဘို့ ငွေငွေခြေစွပ် လေးဆယ်လေးဆယ်ကို လုပ်ရမည်။
20 ထိုအတူ တဲတော်မြောက်ဘက်မြောက်ဘက်၌ ကာရန်ပျဉ်ပြားပျဉ်ပြား နှစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်ရှိရမည်။
21 ထိုပျဉ်ပြား၌လည်း ငွေငွေခြေစွပ်လေးဆယ်လေးဆယ်၊ တပြားနှစ်နှစ်ခုစီရှိရမည်။
22 တဲတော်အနောက်ဘက်ဘက်၌ ကာရန် ပျဉ်ပြားပျဉ်ပြားခြောက်ခြောက်ပြားကို၎င်း၊
23 ထောင့်တဘက်ဘက်တချက်၌ ကာရန် ပျဉ်ပြားပျဉ်ပြားနှစ်နှစ်ပြားကို၎င်း လုပ်ရမည်။
24 အထက်၌၎င်း၊ အောက်၌၎င်း၊ ကွင်းကွင်းကိုတပ်၍ စေ့စပ်လျက် ထောင့်နှစ်နှစ်ခုကို ပြီးစေရမည်။
25 ပျဉ်ပြားပျဉ်ပြားရှစ်ရှစ်ပြား၊ ငွေငွေခြေစွပ်ဆယ်ခြောက်ခု၊ တပြားနှစ်နှစ်ခုစီ ရှိရမည်။
26 တဲတော်၌ ကာရသော ပျဉ်ပြားပျဉ်ပြားကို လျှိုစရာဘို့ အကာရှသား ကန့်လန့်ကျင်တို့ကို တဘက်ဘက်ငါးငါးချောင်းစီ လုပ်ရမည်။
27 တဲတော်နောက်ဖေး၌ ကာရသော ပျဉ်ပြားပျဉ်ပြားကို လျှိုစရာဘို့ ကန့်လန့်ကျင်ငါးငါးချောင်းကိုလည်း လုပ်ရမည်။
28 အလယ်အလယ်ကန့်လန့်ကျင်ကို၊ ထောင့်တဘက်တချက်၌ ဆုံးစေရမည်။
29 ပျဉ်ပြားပျဉ်ပြားတို့ကို ရွှေနှင့်မွမ်းမံရမည်။ ကန့်လန့်ကျင်လျှိုဘို့ရာ ရွှေကွင်းကွင်းကိုလည်း လုပ်၍၊ ကန့်လန့်ကျင်တို့ကို ရွှေနှင့်မွမ်းမံရမည်။
30 တောင်ပေါ်မှာတောင်ပေါ်မှာ သင့်အားပြပြသောပုံနှင့်အညီ၊ တဲတော်ကို တည်ဆောက်ရမည်။
31 တနည်းကား၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍၊ ခေရုဗိမ်ခေရုဗိမ်အရုပ်နှင့် ချယ်လှယ်သော ကုလားကာတထည်ကို ချုပ်ရမည်။
32 ရွှေရွှေချသော အကာရှသား တိုင်တိုင်လေးလေးတိုင်တိုင်အပေါ်မှာ၊ ထိုကုလားကာကို ဆွဲထားရမည်။ ထိုတိုင်တိုင်တို့သည် ရွှေရွှေတံစို့နှင့်၎င်း၊ ငွေငွေခြေစွပ်လေးလေးခုနှင့်၎င်း ပြည့်စုံရမည်။
33 သက်သေခံချက်ထားသော သေတ္တာကိုသေတ္တာကို၊ ကုလာလားကာအတွင်းသို့ သွင်းစရာဘို့ ထိုကုလာလားကာကို ရွှေချောင်းဖြင့် ဆွဲကာ၍၊ ဟဂျာအရပ်၊ ဟဂျာဟဂျုံအရပ် နှစ်ပါးစပ်ကြား၌ အပိုင်းအခြား ဖြစ်ရမည်။
34 ဟဂျာဟဂျုံ အရပ်၌ သက်သေခံချက်သေတ္တာသေတ္တာအပေါ်မှာ၊ သေတ္တာသေတ္တာအဖုံးကို တင်ထားရမည်။
35 ကုလားကာပြင်မှာ စားပွဲစားပွဲကို ထားရမည်။ တဲတောင်တောင်ဘက်ဘက်နားမှာ မီးခုံမီးခုံကို၎င်း၊ မြောက်ဘက်မြောက်ဘက်နားမှာ စားပွဲစားပွဲကို၎င်း၊ တဘက်ဘက်နှင့်တဘက်ဘက် ဆိုင်မိအောင် ထားရမည်။
36 တဲတဲတော်တံခါးဝ၌ ကာရန်၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောပိတ်ချောဖြင့် ပြီး၍၊ ချယ်လှယ်ချယ်လှယ်သော ကုလားကာတထည်ကို လုပ်ရမည်။
37 ထိုကုလားကာဘိုပ ရွှေတံစို့နှင့်ပြည့်စုံသော အကာရှတိုင်တိုင်ငါးငါးတိုင်တိုင်ကို လုပ်၍ ရွှေနှင့်မွမ်းမံရမည်။ ကြေးဝါကြေးဝါခြေစွပ်ငါးငါးခုကိုလည်း သွန်းရမည်။
Arcana Coelestia 648, 9592, 9593, 9594, 9595, 9596, 9597, ...9598, 9599, 9600, 9601, 9602, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, 9630, 9631, 9632, 9633, 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646, 9647, 9648, 9649, 9650, 9651, 9652, 9653, 9654, 9655, 9656, 9657, 9658, 9659, 9660, 9661, 9662, 9663, 9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9669, 9670, 9671, 9672, 9673, 9674, 9675, 9676, 9677, 9678, 9679, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691, 9692, 10750
Arcana Coelestia 296, 308, 2576, 3300, 3519, 3540, 3708, ...4922, 5319, 9229, 9437, 9466, 9467, 9468, 9471, 9472, 9509, 9873, 10129, 10189, 10276, 10733
Apocalypse Revealed 239, 342, 450, 529, 585, 586, 725, ...793, 814
Apocalypse Explained 208, 277, 364, 392, 417, 548, 576, ...700, 799, 1042, 1143, 1186
ထွက်မြောက်ရာ 25:21, 40, 27:16, 28:15, 31:7, 35:12, 36:8, 35, 38:27, 30, 40:4, 5, 21, 22, 28
တောလည်ရာ 4:5, 25, 31
၃ ဓမ္မရာဇဝင် 6:16, 20, 22, 29, 8:6
၁ ရာဇဝင်ချုပ် 17:1, 28:19
၂ ရာချုပ် 3:14
ဟေဗြဲ 9:2, 3
Coronis (An Appendix to True Christian Religion) # 37
37. "Onatime, when I was meditating on conjugial love, the desire seized my mind of knowing what that love had been like with those who lived in the Golden Age, and what, afterwards, in the succeeding ones which are called the Silver, Copper and Iron ages. And, as I knew that all who lived well in those ages are in the heavens, I prayed to the Lord that it might be permitted me to speak with them and be instructed.
"And, lo! an angel stood by me, and said, 'I am sent by the Lord to be your guide and companion; and I will lead and accompany you, first, to those who lived in the first era, or Age, which is called the Golden.' (The Golden Age is the same as the age of the Most Ancient Church, which is meant by the head of fine gold, on the statue seen by Nebuchadnezzar inadream - Dan. 2:32 - of which we have spoken before.) The angel said, 'The way to them is laborious; it lies throughadense wood, which no one can traverse unlessaguide be given him by the Lord.'
 "I was in the spirit, and prepared myself for the journey, and we turned our faces to the east; and as we proceeded, I sawamountain, whose summit towered beyond the region of the clouds. We crossedagreat desert, and reachedawood crowded with all kinds of trees, and dark by reason of the dense growth thereof, of which the angel told me beforehand. But that wood was intersected by numerous narrow paths. The angel said that these were so many windings of error, and that unless the eyes were opened by the Lord, and the olive-trees girt about with vine tendrils seen, and the steps led from olive-tree to olive-tree, the traveller would stray into Tartarus. This wood is of suchanature, to the end that the approach may be guarded; for no other race but the primeval one dwells on that mountain.
 "After we entered the wood, our eyes were opened, and we saw here and there the olive-trees entwined with vines, from which hung bunches of grapes ofadark-blue colour, and the olive-trees were arranged in perpetual windings; wherefore, we walked round and round as they came into view; and at length we sawagrove of lofty cedars, and some eagles on their branches. When he saw these, the angel said, 'Now we are on the mountain, not far from its summit.'
" And we went on; and lo! behind the grove wasacircular plain, where were feeding male and female lambs, which were forms representative of the state of innocence and peace of the inhabitants of the mountain.
"We crossed this plain, and lo! there were seen thousands and thousands of tents to the front, and at the sides in every direction, as far as the sight could reach. And the angel said, 'Now we are in the camp where dwell the armies of the Lord Jehovih, for so they call themselves and their habitations. These most ancient people, while they were in the world, dwelt in tents; for which reason they also dwell in them now.' But I said, 'Let us bend our way to the south, where the wiser of them dwell, that we may meet some one with whom we may enter into conversation.'
 "On the way, I saw atadistance three boys and three girls sitting at the door of their tent; but as we drew near, both the boys and the girls were seen as men and women of medium height. And the angel said, 'All the inhabitants of this mountain appear atadistance as young children, because they are in the state of innocence, and early childhood is the appearance of innocence.'
"On seeing us, the three men (viri) ran towards us, and said, 'Whence are you, and how have you come hither? your faces are not of the faces belonging to this mountain.'
"But the angel replied, and told the means by which we obtained access through the wood, and the reason of our coming.
"On hearing this, one of the three men invited and conducted us into his tent. The man was clad inacoat ofapurple colour, andatunic of white wool; and his wife was dressed inacrimson robe, and had, underneath,avest of fine embroidered linen.
 "But inasmuch as the desire of knowing about the marriages of the most ancient people was in my mind, I looked at the husband and the wife by turns, and observed as it wereaunity of their souls in their faces; and I said, 'You two are one.
"And the man answered, 'We are one; her life is in me and mine in her. We are two bodies, but one soul. There is between usaunion like that of the two tents in the breast, which are called the heart and the lungs; she is the substance of my heart, and I am her lungs; but as by heart we here mean love, and by lungs wisdom-we understand the latter by the former on account of correspondence-she is the love of my wisdom, and I am the wisdom of her love. Hence, as you said, there is the appearance of the unity of our souls in our faces. Hence, it is as impossible to us, here, to look in lust upon the wife ofacompanion, as it is to look at the light of our heaven from the shade of Tartarus.'
"And the angel said to me, 'You hear now the speech of these angels, that it is the speech of wisdom, because they speak from causes.'
 "After this conversation, I sawagreat light onahill among the tents, and I asked, 'Whence is that light?'
"He said, 'From the sanctuary of our tabernacle of worship.'
"I enquired whether it was allowed to approach; and he said that it was. Then I drew near, and saw the tabernacle exactly according to the description without and within, of the Tabernacle which was set up for the Sons of Israel in the wilderness, the form of which was shown to Moses on Mount Sinai (Exod. 25:40; 26:30). I asked, further, 'What is there within, in its sanctuary, whence so greatalight proceeds?'
"And he answered, 'There isatablet, on which is written, "THE COVENANT BETWEEN THE LORD JEHOVIH AND HEAVEN."' He said no more.
"Then, also, I questioned them about the LORD JEHOVIH, whom they worship; and I said, 'Is He not God the Father, the Creator of the universe?'
"And they replied, 'He is; but, by the Lord Jehovih we understand Jehovah in His Human; for we are not able to look upon Jehovah in His inmost Divinity, except through His Human': and then they explained what they understood, and also what at this day they understand, by the
Seed of the woman trampling the serpent's head (Gen. 3:15);
namely, that the Lord Jehovih would come into the world, and redeem and save all who believed on Him, and who would believe thereafter.
"When we had finished this conversation, the man ran to his tent, and returned withapomegranate in which wasavast number of golden seeds, which he presented to me, and I brought away: this wasatoken that we had been with those who lived in the Golden Age." [See the little work on CONJUGIAL LOVE , n. 75.] - For an account of the heavens of the remaining Churches which succeeded the Most Ancient, in their order, see in the same little work on CONJUGIAL LOVE (n. 76-82).